प्रचण्डले चाल्न नसकेका ती कदम, जसले ओलीको राजनीति स्वाहा पारिदिन सक्थे - Jyotinews
प्रचण्डले चाल्न नसकेका ती कदम, जसले ओलीको राजनीति स्वाहा पारिदिन सक्थे
विशेष संवाददाता २०७७ फागुन २६ गते १९:०६
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केपी शर्मा ओलीको पुनरोदय भएको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा हुन शुरू भएको छ ।
अत्यन्तै व्यक्तिवादी, संकीर्ण र गुटगत सोच भएका ओली नै एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष बन्न पुगेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका ओली नै सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् ।
वर्तमानका घटनाक्रमले ओलीलाई शक्तिशाली देखाएको छ, यद्यपी ओली ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन् कि साँच्चिकै बाघ हुन् भन्ने कुरा अब आउने उथलपुथलले निर्क्योल गर्नेछ ।
पुनःस्थापित माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच प्रचण्डले सही समयमा सही निर्णय नगरेका कारण ओली यतिधेरै शक्तिशाली बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
हामीले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूलाई सोधेका थियौं, प्रचण्डले कस्तो कदम चालेको भए ओलीकोराजनीतिस्वाहा हुन्थ्यो ?
वैशाखमै अविश्वासको प्रस्ताव नहाल्नु गल्ती
‘ओली प्रचण्डकै कारण शक्तिशाली बनेका हुन्,’ पेरिसडाँडामा भेटिएका एक प्रचण्डनिकट नेताले आरोप लगाए । ज्योतिन्यूजले कसरी भनेर सोध्यो। उनले झटपट जवाफ दिइहाले, ‘वैशाखमै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिदिएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन ।’
उनका अनुसार समयमै अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगर्नु प्रचण्डको गल्ती थियो । त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको भए ओलीको बहिर्गमन निश्चित थियो।
वैशाख १० गते ओलीले ल्याएको दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सर्वाधिक आलोच्य बनेको थियो ।
त्यतिबेलै ओली समूहका महेश बस्नेतलगायतका नेताहरूले तत्कालीन संघीय समाजवादी दलका नेता डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेका थिए । अपहरणको घटनाले विदेशी मिडियाहरूको पनि ध्यान तानेको थियो ।
त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव राखेको भए ओलीले संसद भंग गर्न पाउने थिएनन् । साथै नेकपा पुनः एमाले र माओवादी तिरै जाने अवस्था बन्ने थिएन । अर्थात् ओलीले सेटिङ गरिसक्न भ्याएका थिएनन् ।
आलोपालो सहमति तोड्नु ठूलो भूल
गत सालको मङ्सिर ४ गते प्रचण्डले ओलीलाई ५ वर्ष पूरै प्रधानमन्त्री बन्न लिखित गरेर दिए । पार्टी एकता हुँदा आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो ।
उक्त सहमति तोडेर ओलीलाई नै पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन भन्नु प्रचण्डको ठूलो भूल थियो । प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै आलोपालो सहमति तोडेर आफूले गल्ती गरेको बताउने गरेका छन् ।
प्रचण्ड त्यतिबेलै आलोपालो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको भए ओलीविरुद्ध बनेको मत थप कमजोर हुन्थ्यो । सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको थिएन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर देशलाई वामगठबन्धनको घोषणापत्र अनुसार अघि बढाउने मौका पाउने थिए ।
ओलीसँगको अन्तरसंघर्ष गुपचुप राखिनु !
केही दिनअघिएक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता भएको भोलिपल्टदेखि नै ओलीको बानी थाहा भएको थियो ।’
त्यसो भए प्रचण्डले ओलीलाई नंग्याउन किन शुरू गरेनन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रचण्डले ओलीसँगको अन्तरसंघर्षलाई निकै समयसम्म सार्वजनिक गर्न चाहेनन् / गरेनन्।
बरू दिनको चार पटकसम्म बालुवाटार धाए । प्रचण्डनिकट अर्का एक प्रभावशाली नेता भन्छन् – ‘गधा धोएर गाई बन्दैन भनेर हामीले कमरेड प्रचण्डलाई धेरै सम्झायौं। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – गधा धोएर गाई बनाउन खोजेको होइन, गाईजस्तै बनाउन खोजेको हो ।’
प्रचण्डले गधालाई गाईजस्तै बनाउन खोज्नु नै भूल थियो। शुरूकै दिनदेखि ओली प्रवृत्तिविरुद्ध प्रचण्डले बाहिर आएर प्रहार गर्न थालेको भए जनता पनि बढी नै सचेत हुन्थे । ओलीको राजनीतिक मनोबल र व्यक्तिगत आकांक्षा बढ्न पाउने थिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कन्भिन्स गर्न नसक्नु/नचाहनु
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड बाहिरी दुनियाँसँग लगभग अलग्गिए । यो कुरा मान्न प्रचण्ड तयार भने छैनन्, तर प्रचण्डको सक्रियता ओलीको तुलनामा निकै कम थियो ।
जसले बढी अन्तरक्रिया गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसको कुरा पत्याउँछ। भारत, चीन, अमेरिका र इयुसँग प्रचण्डले निकै कम अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू गरे ।
बरू ओलीले विदेश गएर जानी नजानी अंग्रेजी बोल्न थाले । ओलीका समर्थकहरूले ओलीको अंग्रेजी भाषामाथिको क्षमताको प्रचार गरे ।
के बोले ओलीले भन्ने कुरा गौण रह्यो । बरू भेनेजुएलाका बारे वक्तव्य निकाल्दा प्रचण्डलाई ब्याक फायर भयो । एमसीसी विरुद्ध प्रचण्ड शुरूदेखि नै लागेको जस्तो गरेर ओली समूहले प्रचार गर्यो । प्रचण्डलाई यी कुराहरूको हेक्का भएन । अथवा सल्लाहकारहरूले सम्झाएनन् ।
प्रचण्डले एकाध देश भ्रमण त गरे, कतिपय भ्रमण पारिवारिक थिए । श्रीमती सीता दाहालको स्वास्थ्यउपचारका लागि अमेरिका र भारत भ्रमण गरे । कूटनीतिक भ्रमण लगभग शून्य प्राय थियो ।
संसद् विघटनपछि उत्पन्न अप्ठेरो स्थितिमा मात्र प्रचण्डले विदेशी समुदाय गुहारेका थिए, त्यतिबेला निकै ढिलो भइसकेको थियो ।
अन्तिममा…ओलीको जस्तो सल्लाहकार टीम नहुनु
ओलीको सल्लाहकार टीमले पीआर एजेन्सीलाईटन्न पैसा दिएर कहाँ जाने, के बोल्ने, कस्तो कपडा लगाउने, कस्तो समाचार बाहिर दिने, बैठकमा के भन्ने र बाहिर के भन्ने, हेडलाईन समाचार कसरी दिने, के खाने, के पढ्ने जस्ता धेरैसल्लाह लिएको थियो ।
भन्ने गरिन्छ, अस्तिसम्म बालुवाटारमा ५ जनाको भारतीय टीम नै थियो, यी सबै व्यवस्थापनका लागि । त्यही टीमले जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीलाई ल्याएर अन्तर्वार्ता दिलाएको थियो । अन्तर्वार्ताका लागि प्रश्न र उत्तर पहिल्यै त्यही टीमबाट रेडीगरिएको थियो ।
सल्लाहकार टीम सक्षम नहुनुले प्रचण्डलाई कहीं न कहीं अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।
आफन्तवादी सोचबाट बाहिर निस्केर सक्षम युवा र विज्ञको टीमलाई सल्लाहकारमा नराख्नु ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ ।